Imba - Easy Multi Display EMD Software (Dynamic Signage)
Easy Multi Display EMD Software (Dynamic Signage)
Iyo inodhura zvakanyanya digital signage mhinduro pamusika.
Mafashoni & Retail
Mushonga & Hutano
Mahotera & Keke
DHIMONI DZEMAKARA SOFTWARE
Izvo zvinodhura zvakanyanya pamusika.
PAMUSORO PENYU DZINOGADZIRA
How Easy Rakawanda Kuratidzwa Kunoshanda
Kunyangwe iwe uri bhizinesi diki kana bhizimusi rakakura, Easy Multi Display inoita kuti zvive nyore kuratidza yako multimedia pane dzakawanda zvinoratidzwa. Ne1 rezenisi, iwe unogona kuratidza kusvika makumi maviri emaviri masosi emidhiya kamwechete, pamatanhatu matanhatu akasiyana ekuratidzira. Taura nesu nezvedu bhizinesi zvigadziriso sarudzo dzisingagumi kuratidza.
Setup komputa uye TV inoratidza.
Isa Easy Multi Display software.
Gadziridza ako maratidziro.
IYI NDIMI IYI RUDZIKI RWAKO?
Easy Multi Display ndeye chero sangano rinoda kuratidza dhijitari ruzivo kune vatengi vavo uye vashanyi.
Dzvanya pazasi kuti uwane zvimwe.
Kafati & Maharaji
Mafashoni & Zvitoro Zvekutengesa
Mishonga & Utano
Bata isu kuti tikurukure
NEI SARUDZA US?
Mazhinji eanokwikwidza edu anodadira € 30 pachikwangwani, pamwedzi. Nekuda kweizvozvo, iwe unobhadhara kupfuura € 360 pagore pane imwechete skrini! Vamwe vedu vanokwikwidza zvakare vanokumbira iwe kuti utengezve software pamutengo we- € 1200 muhomwe. Ne Easy Multi Display, iwe unobhadhara kamwe chete.
Easy Multi KUSVIRA
Shandisa kusvika kumatanhatu ekuratidzira pasina imwe mari.
Hapana mutengo unoenderera kana muripo wemwedzi.
Shandisa komputa yako yako kushandisa software.
Hapana internet inodikanwa.
Mutengo unowedzera nehuwandu hwezviratidziro.
Bhadhara pamwedzi kunyoreswa.
Tenga mutambi wechi3 kumhanyisa software.
Igore rakavakirwa sevhisi inoda internet.
Nokusarudza Easy Multi Display, unogona kuchengetedza kusvika € 250 pamwedzi, ndiyo € 3000 pagore pane yako digital dignage solution.
ZVINODZIDZWA NEZVINONYANYA KUTI DZIDZISIRA
Tanga mawebhusaiti, tambanudza vhidhiyo, uye ratidza mavhidhiyo emuno, mifananidzo uye mimhanzi.
Easy kushandisa plug uye kutamba software. Hapana anodenha 3rd party michina inodiwa.
Software inomhanyisa pane yako yemuchina. Hapana internet kana yakaoma gore network inodiwa.
Bhadhara kamwe chete for rezinesi rako Rakawanda Ratidza uye uishandise zvachose.
Isu tinopa rubatsiro rwakanyanya. Tsvaga zvedu chizivo chezivo, kana kuti tibvunze isu toga.
Neine rezinesi redu bhizinesi, unogona kuratidza uye kumhanyisa zvimwe zvirongwa zve software!
Tisati tanyora menyu edu pane masiraidhi. Yakanga yakaoma uye ine zvishoma kukanganisa. Ne Easy Multi Display, isu tinobva tangotora pfungwa yevatengi vedu.
EMD ine mutengo unoregera kukwikwidza kwese! Mutengo wacho unobatsira kwazvo uye hapana mari yakavanzika. Iyo EMD timu inoteerera uye inoteerera kune zvese zvandinoda.
Sezvo sezita rinoratidza, EMD iri nyore kushandisa. Ini hapana chandinoziva nezvemakomputa. NeEMD isu tine yakagadziriswa musiyano wehofisi yedu yemazino.
Chiremba wemazino, Brussels
DZIMWE ZVEVADZIDI Vedu
Mwedzi wega wega, Vanopfuura mabhizimusi zana nemashanu vari kushandisa software yedu kuratidza yavo vhidhiyo, mifananidzo, uye zvemukati webhusaiti kusimudzira nekushambadza bhizinesi ravo.
Zvese zvaunoda kuti utange ...
Ratidza anosvika makumi maviri nematanhatu nzvimbo dzezvenhau
Local Network Kuwanikwa
Cloud Software Kugadziridza
Mahara Ekudzokorora kwemwedzi gumi nemiviri
1 Maawa Ekudzidzira Pamhepo Nevashandi Vanotsigira
Onsite Kuiswa & Tsigiro
* Mari yekuwedzera yegore rinoshanda chete kana iwe ukasaina kwatiri kusarudza chibvumirano chekuchengetedza. Click pano kuti uzive zvakawanda.
Mmutauro we ulti
​Sarudzo yemitauro: Chirungu, French, Spanish in ...
Unoda inokosha inopihwa & discounts?
Easy Multi Display Showcase
Copyright © 2020 Easy Multi Display EMD Software (Dynamic Signage)
Mhoro, ndingakubatsira sei?